Kulan soo dhoweyn ah oo Wasaaradda A Dibadda u sameysay Diblomaasiyiinta ka howlgala Safaaradaha iyo Qunsuliyadaha Soomaaliya. – idalenews.com
Kulan soo dhoweyn ah oo Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo iskaashiga Caalamigaay shalay ugu sameysay Safari Hotel ee Muqdisho qaar ka mid ah Diblomaasiyiintaka howlgala Safaaradaha iyo Qunsuliyadaha Soomaaliya ay ku leedahay dibadda,kuwaasoo dalka dib ugu soo laabtay kadib markii wasaaraddu ay u dirtay fariin kubaaqeysay inay Xarunta ku yimaadaan ugu dambeyn 10-ka bishan January, ayaa waxaa halkaasi hadalo ka jeediyay Mas’uuliyiin kala duwan oo Wasaaradda ka tirsan .
Ra’iisul wasaare kuxigeenka Ahna Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo iskaashiga caalamiga Marwo Fawsiya Yuusuf Xaaji Aadan ayaa soo dhoweyn kadib waxa ay tiri “.
Diblomaasiyiintu waa inay la jaan-qaadaan isbadalka cusub ee dalka ka socda,wasaaradeeduna waxa ay aheyd wasaaradaha ugu sareeya geeska Afrika ,waxaanu dooneynaa inaan baabi’inno magac xumada Soomaalida loogu yeero ee ah argagaxiso iyo burcad badeed”.
Golaha amaanka oo taageeray fara gelinta Faransiiska ku sameeyay Mali